Tilmaamaha Safarka Xalaasha Nice - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Nice (waxaa loogu dhawaaqaa sida erayga Ingiriisiga ah "niece") waa magaalo weyn oo ku taal Faransiiska kuna taal Riviera Faransiis ah. Waa goob caan ah oo loogu talagalay dalxiisayaasha yar iyo weynba, oo leh wax ay siiyaan qof walba. Waxay caan ku tahay aragtida quruxda badan ee ku saabsan Promenade des Anglais, biyaheeda caanka ah, waana magaalo dekedo leh qowmiyado kaladuwan.
Asalka Nice waxaa laga heli karaa burburkii Gallo-Roman ee Cimiez, buuraha dushooda ilaa boulevard de Cimiez laga soo bilaabo magaalada hoose. Cimiez sidoo kale waxaa ku jira guri keniisad ah iyo matxafyada qaar, laakiin maalmahan, inta badan dadka magaalada degan waxay ku nool yihiin meel u dhow heerka badda. Nice waxay ka mid ahayd Duchy Talyaani ah ee Savoia ka dibna Boqortooyada Sardinia illaa laga siiyay Faransiiska dhammaadkii 1860. Luqadda qadiimiga ah ee maxalliga ah waa Nissart, calaamadaha waddooyinka qaarkoodna waxay ku hadlayaan laba luqadood. Si kastaba ha noqotee dad aad u yar ayaa ku hadla Nissart, xitaa dadka waayeelka ah ayaa yaqaan oo ku hadla Faransiiska. Ha u maleynin in qof kasta oo aad la kulanto uu ku hadli doono Ingiriis - dadaalka Faransiiska had iyo jeer waa la qadarin doonaa.
Nice Côte d'Azur Airport. waa mid ka mid ah kuwa ugu mashquulka badan Faransiiska waxayna leedahay duulimaadyo maalinle ah oo taga Paris, waxayna toos u aadeysaa inta badan magaalooyinka waaweyn ee Yurub, oo ay ku jiraan Moscow iyo Istanbul, ilaa New York City, iyo xilliyadiiba Kanada, iyo dhowr meelood oo ku yaal Waqooyiga Afrika iyo Bariga Dhexe. . Gegada diyaaraduhu waxay ku taalaa dhamaadka galbeed ee magaalada Nice meel qashin qub ah. Imaanshaha iyo bixitaanka cimilada wanaagsan waxay badanaa bixisaa aragtiyo qurux badan oo Riviera Faransiis ah.
Duulimaadyada badankood waxay isticmaalaan Terminal 1 (Terminaalkii hore) halka Terminal 2 ay ugu horeyn adeegsadaan Air France (iyo shuraako) iyo Easyjet. Waxaa jira bas xamuul oo bilaash ah inta udhaxeysa boosteejooyinka.
Waddo cagaf ah ayaa ka socota inta u dhexeysa magaalada iyo garoonka diyaaradaha. Tan waxaa la filayaa inuu furmo 2019; Dhanka kale waxaa jira carqalad lama huraan ah iyo leexsiga waddooyinka garoonka diyaaradaha iyo nawaaxigiisa.
Gegada diyaaradaha ilaa Nice
Gawaarida magaalada - Habka ugu kalsoonida badan ee magaalada looga soo dego garoonka diyaaradaha waa basaska tooska ah ee garoonka, 98 & 99. The 98 wuxuu maraa dhinaca hore ee badda ilaa magaalada hore, wuxuu ku egyahay Place Blanqui / Nice Riquier, halka kan 99 waxay u socotaa xarunta tareenka ee weyn (Gare Nice Ville SNCF). Labaduba waa € 6 waxayna u adeegaan T1 iyo T2 labadaba. Iibso tigidhkaaga intaadan fuulayn qolka tikidhada, laakiin ku noqoshada garoonka diyaaradaha waad siin kartaa darawalka markaad fuusho. Tigidhkaagu wuxuu ansax ku yahay wareejinta basaska iyo taraamka maxalliga ah 74 daqiiqo laga bilaabo bilowga. 98-ka ayaa soconaya 06:00 illaa 23:50 15-kii daqiiqaba mar walbana waa la buuxiyaa, maadaama rakaabka soo galaya ay ku sii socdaan T2 ka hor inta aysan rakaabka ka dhoofin T1. 99-ka ayaa soconaya 08:00 illaa 21:00 30 daqiiqo kasta.
Bas joogto ah 23 - Xiriirka ugu jaban ee Nice waa adeegga basaska maxalliga ah ee 23, oo ku kacaya 1.50 05, oo soconaya inta u dhexeysa 30:21 iyo 00:1. Joogsiga basku wuxuu ku yaal wadada weyn ee ka baxsan Terminal XNUMX, loona yaqaan “Aéroport / Promenade“. Dibedda, joogsiga ayaa ku yaal dhinaca ka soo horjeedka waddadan weyn ee mashquulka badan, isticmaal gunta hoose si aad u gaarto Terminalka. Si aad u gaarto saldhiga weyn ee tareenka (Gare Nice Ville), waxay qaadataa ilaa 30 daqiiqo baska kadibna 500 mitir oo cag ah meesha basku istaago “Thiers / Gambetta".
Xirmooyinka gobolka - ilaa Monaco, Menton, Cannes, Antibes iyo Saint-Raphaël. Haddii aad ka dhoofayso garoonka diyaaradaha, waxaad ka iibsan kartaa tikidh baska ama waab ka baxsan boosteejada ku xigta isgoysyada, laakiin dooro tan dambe haddii ay suurogal tahay maxaa yeelay darawalku wuu diidi karaa inuu iibiyo tikidhada haddii uu soo daaho.
Tareenadu - Ku habboon meelaha qaarkood, sidoo kale waxaa jira mid yar tareenka u dhow garoonka diyaaradaha (Nice St Augustin) halkaas oo aad ka qaadi karto tareenka TER oo joogsiga bari u aada magaalada Nice, Monaco iyo dhammaan saldhigyada illaa xadka Talyaaniga ee Ventimiglia, ama dhanka galbeed ee Antibes iyo Cannes. Saldhigga waxaa lagu tagi karaa cag (qiyaastii 1 km u jirta T1) iyada oo loo marayo marinnada hoose iyo isgoysyada, dhinaca kale ee dhismaha xafiiska Arenas. Hubso inaad la soo baxdid qadaadiic yuuro ah madaama mashiinka lagu iibiyo tigidhada uusan aqbali doonin qoraal. Waxaa garoonka ku yaal mashiinno lacag-beddelayaal ah. 10 qof bedelkiiba waa inuu kufilan karaa safarka kasta.
Taksiyada --23 31-XNUMX ilaa Bartamaha magaalada.
Blacklane - Waxay bixisaa adeegga wareejinta garoonka diyaaradaha qiyaastii. € 40 ilaa bartamaha magaalada.
Huteelada qaar waxay basaska ka raacaan garoonka diyaaradaha, weydii hoteelkaaga kahor ama imaatinka.
Haddii aysan jirin wax gaadiid ah oo socda, waa wax lagu kalsoonaan karo in la ogaado in ay suurtagal tahay in la lugeeyo lixda km magaalada ama dhinaca kale garoonka diyaaradaha, in ka yar saacad, in kasta oo aagga garoonka ku yaal uu yahay degmada Nice ee cas-cas, iyo kiiloomitir kii hore kii hore waa waddo wareeg ah. Tani waxay faa'iido u noqon kartaa jahwareerka bulshada ee hadda ka jira Faransiiska, halkaas oo Muuqaal (banaanbaxyo) iyo grèves (shaqo joojinta) waxay had iyo jeer saameyn ku yeelataa gaadiidka dadweynaha. Waa caqli-gal in la hubiyo wargeyska maxalliga ah (Nice Matin), halkaasoo aad sida caadiga ah ka heli doontid digniin hore oo ku saabsan dhibaatooyinka iman kara.
Nice waxay kuxirantahay France inteeda kale iyada oo loo maro shabakada tareenka ee SNCF. Tareen toos ah TGV oo ka yimaada Paris ilaa Nice wuxuu qaataa 5½ saacadood, qaybta udhaxeysa Marseille iyo Nice (2 saac 40 daqiiqo) kuma socdo waddooyinka xawaaraha sare ku socda. Qiimaha tikidhada dadka waaweyn ee fasalka labaad waxay udhaxaysaa about 19 ilaa € 180, waxayna kuxirantahay hadba intee horay u iibsatay tigidhkaaga, sanadka sanadka iyo hawl wadeenka (adeega "IdTGV", khadka kaliya iyo lama soo celin karo, kana jaban tahay adeegga SNCF). TGV-yada boos celin ayaa ku waajib ah. Tareenku wuxuu yimaadaa magaalada Nice ee xarunta Nice-Ville.
Nice sidoo kale waxay kuxirantahay tareenka tareenka aada magaalooyin kale iyo magaalooyin kuyaala French Riviera, oo ay kujiraan Cannes, Monaco iyo Menton.
Waddo tareen oo cabiran (oo loo yaqaan Tareenka des Pignes) iyada oo loo marayo buuraha iyo dooxooyinka dhulka hoose oo isku xidha Digne-les-Bains iyo Nice. Muuqaal aad u qurux badan laakiin ka raaxo yar khadadka waaweyn ee SNCF. Joojinta saldhiga Nice-CP dhawr dhismo oo ka dambeeya saldhiga weyn ee Nice-Ville.
3 maalin kasta tareenka Thello ee tooska ah wuxuu tagayaa magaalada Milan (4h45) (wuxuu sii marayaa Genoa).
Meelaha kale ee Talyaanigu tago waxaa kamid ah Pisa, Florence, Rome iyo Venice. Tareennada gobolka ee labada dal ee Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa ku hakanaya garoonka Ventimiglia, u wareejinta saldhigga Ventimiglia ayaa loo baahan yahay si looga gudbo xadka. Tareenada Intercity / Eurocity waxay kasii gudbayaan xadka waxayna raacaan Nice-Ville (xarunta dhexe).
Tareenka habeenka masaafada dheer ee toddobaadlaha ah ee ka yimaada Moscow, kana sameeya joogsiga Minsk, Warsaw iyo Vienna iyo kuwo kale, ayaa ka tagaya Moscow Belorussky istaago at 17:21 khamiis kasta oo yimaado Nice ku dhowaad waqti isku mid ah laba habeen ka dib.
Xarunta tareenka dhexe ee Nice-Ville (Gare de Nice-Ville). Xarunta dhexe (magaalada), oo aan lagu khaldin saldhigyada ku yaal xadka magaalada, Nice Riquier iyo Nice St Augustin. Nice-Ville waa rugta booqashooyinka indha indheynta ugu badan sida magaalada duug ah iyo isu socodka.
Xarunta tareenka Nice CP (Gare des Chemins de Fer de Provence). Jadwalka xariiqda cabiran: Nice - Digne-les-Bains oo ku taal Alpes-de-Haute-Provence (Upper Provence). Dhawr qaybood oo ka dambeeya saldhiga weyn ee SNCF Nice-Ville
Gare Nice-St-Augustin, Avenue Edouard Grinda. Isniinta ilaa Jimcaha 06: 00-13: 10, 13: 40-20h40; Sa Su fasaxyada: 09: 15-12: 30, 13: 30-17: 20. Waa rugta tareenka ugu dhow garoonka diyaaradaha (la cusbooneysiiyay May 2015)
A8 autoroute-ka ayaa ah habka ugu sahlan ee loo maro Nice midkood galbeedka (Cannes, Aix-en-Provence) ama Talyaaniga. Laga soo bilaabo Galbeedka ka bax 50 oo raac calaamadaha Promenade des Anglais oo ku geynaysa Nice waana waddo qurux badan oo xeebta ah. Ka imanaya dhinaca bari ka bax 55 oo raac calaamadaha 'Xarunta Wanaagsan'.
U soo dhowaanshaha magaalada xagga bari, saddexda 'Corniches' ('Basse', 'Moyenne' iyo 'Grande') waxay bixiyaan waddo qurux badan oo ka socota Menton ilaa Nice. 'Grande Corniche' waa midka ugu sarreeya; waxay maraysaa in ka badan 500 m heerka badda ee La Turbie.
Basaska dhaadheer waxay isku xiraan Nice iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo Yurub ah. Eurolines, iyo the French LER “Lignes Express Regionaux” waxay Nice ku xidhayaan Marseille, Toulon iyo Aix-en-Provence qiimo macquul ah iyo 3 saacadood oo safar la aqbali karo ah oo la mariyo wadooyinka waaweyn.
Nice waa ku habboon tahay xeebta, markaa waa inaad awood u yeelataa inaad si fudud ku hesho jidkaaga dhib malahan haddii aad ku ordo naaftada ama ha u ogolaato dabaysha. Si kastaba ha noqotee, xusuusnow inaad la xiriirto dekedda maxalliga ah ka hor intaadan imaan reserve meel doontaada ah. Haddii kale waxay u badan tahay inaysan boos kuu bannaanayn.
Gare Maritime de Nice (Terry terminal), Port de Commerce, Terminal 1 (Quai Amiral Infernet),. Duulimaadyada tooska ah ee tooska loo maro: Bastia, Ajaccio, Calvi iyo L'Île-Rousse oo ku yaal Corsica. Jaaleynta horay loo sii wado ayaa lagula taliyaa kiisaska oo dhan.
Meel u dhow Monaco waa deked weyn oo dalxiis.
Baska iyo taraamka
Magaalo kasta oo muhiim ah oo ku taal Faransiiska Riviera waxay leedahay shabakad u gaar ah basaska maxalliga ah, ee Nice waa Lignes d'Azur (Antibes ayaa leh Envibus, Cannes ayaa leh Baska Azur, iyo wixii la mid ah), iyo 100 ama ka badan Lignes d'Azur jidadka waa noocyada ugu muhiimsan ee gaadiidka magaalada ee dadka deegaanka ee aadaya shaqo ama iskuul. Xiisaha badan ee loo qabo dalxiisayaasha, shabakad isku xirta magaalooyinka, TAM (Gaadiidka Alpes-Maritimes) wuxuu isku xiraa dhammaan magaalooyinka Bariga Riviera ee u dhexeeya Cannes iyo Menton iyo dhammaan tuulooyinka waaweyn sida Èze iyo Vence. Saldhigeedu wuxuu ku yaal 16 Avenue des Diables Bleus. Qiimaha basku waa 1.50 2017 (74) oo kaliya iyadoo loo badalayo adeeg isku xira aan soo laabaneyn oo sidoo kale la ogolyahay mudo XNUMX daqiiqo ah, marka waxaa haboon in la barto nidaamka basaska si aad u wareegto.
Wadooyinka Lignes d'Azur iyo TAM waxay iskula jiraan gudaha iyo hareeraha Nice, marka tigidhada iyo nidaamka canshuuraha waxaa lagu darayaa aag tigidh guud, kaas oo tikidhada iyo baasaaska Lignes d'Azur ee maxaliga ah lagu aqbalo basaska TAM ee masaafada dheer (kaliya udhaxeeya Cagnes-sur-Mer dhanka galbeed iyo Cap d'Ail oo gaagaaban magaalada Monaco dhanka bari). Kharashku waa isku mid labada shabakadoodba - € 1.50 wixii masaafad ah - laakiin TAM, waa inaad had iyo jeer u sheegtaa darawalka meesha aad doonayso, si uu isagu u xukumo haddii aad iibsanayso tigidh TAM ama Ligne d'Azur. Bannaanka aagga guud, kaararka Ligne d'Azur ma aha kuwo ansax ah oo waxaad u baahan tahay inaad ku bixiso fa 1.50 qiimo kaash ah.
Midka laga reebay qiimaha the 1.50 waa baska Airport Express, oo leh flat 6 flat flat. Tani waxay kaa iibsaneysaa Lignes d'Azur maalinta oo dhan u gudub gorgortanka - waxtar leh haddii aad timaaddo, laga yaabee inaysan faa'iido u lahayn haddii aad baxeyso.
Tareenka taraamka wuxuu qaadaa waddo U-qaabeysan oo ka timaadda Las Planas ilaa woqooyi-bari illaa Pont St Michel ilaa waqooyi-galbeed. Waxay xiriirisa saldhigga weyn ee tareenka, boosteejooyinka basaska, magaalada hoose iyo jaamacadda, laakiin ugu horreyn waa nidaam ballaaran oo loo maro rakaabka iyo dadka wax iibsanaya, waana wax qiimo yar u leh dalxiisayaasha - tani waa inay sii fiicnaataa 2019 marka la filayo laynka taraam-bari iyo galbeed. in la dhameystiro. Taraamadu waxay adeegsadaan tikidho la mid ah basaska, laakiin waxaad u baahan tahay inaad ka iibsato mashiinnada joogsiga taraamka (si ka duwan basaska, halkaas oo ay caadi ka tahay inaad lacag siiso darawalka ama tusto kaarkaaga markaad baska soo galayso).
Hal-abuurnimo kale ayaa ah adeegga basaska tooska ah ee “isla-socdaalka tooska ah” ee saacad walba toos ugu taga magaalada Monaco iyada oo loo marayo Autoroute-ka, 100-ka Express, in kasta oo booqdayaashu ay wali doorbidi karaan wadada 100 ee tartiib-tartiibka iyo muuqaalka badan leh.
Adeegga tareenka ee SNCF wuxuu kaloo isku xiraa dhammaan magaalooyinka waaweyn ee xeebta, haddaba waa tee habka ugu wanaagsan ee loo maro - bas ama tareen? Safarka ka socda Nice ee lagu yiraahdo Cannes ee 200 ee baska ah € 1.50 ayaa aad uga jaban tareenka, kaas oo ka badan € 5 Basasku waxay mas'uul ka yihiin ciriiri badan oo cabsi leh waxayna leeyihiin rajo ah inay istaagaan ku dhowaad 2 saac maxaa yeelay waa gaabis iyadoo joogsato badan iyo nalalka taraafikada ee wadada. Haddii lacag kaa dhimantahay oo aadan dhib ka qabin, baska raac. Haddii waqtigaagu kugu yar yahay oo aad doorbideyso inaad fadhiisato, tareen raac
Markaad baska raaceyso, waa inaad ka digtoonaataa qaab aan caadi aheyn oo jadwalka basaska loo dejiyaa. Waxay ku liis gareeyaan waqtiga bixitaanka saldhiga baska ugu horeeya, ee ma qorin kan aad joogto. Dhinaca midig ee jadwalka baska, waxaad haysaa liistada saldhigyada, marka laga reebo kuwa qaar, waxaad ka heli doontaa waqtiga liistada ay baska ku qaadaneyso inuu halkaas ku tago (+ 20 daqiiqo, tusaale ahaan). Tani waxay ka dhigan tahay inaad sameyn doonto qiyaas badan. Waxaa ugufiican in la weyddiiyo qof hooyo ah oo aad ka tagto waqti dheeraad ah oo dheeraad ah haddii aad qorsheyneyso inaad bas u raacdo dhacdo kasta oo jadwalka ku jirta oo runti aadan rabin inaad seegto (garoonka diyaaradaha, tareenka, riwaayadaha, iwm.)
Waxaad ka heli kartaa khariidadaha baska iyo taraamka maxalliga ah khadka tooska ah. Khariidadaha marinku waxay ku hoos qoran yihiin 'Maps' iyo jadwalka 'Timetables' oo qaab PDF ah. Sidoo kale, adeeg cusub ('Jooji jadwalka') ayaa u muuqda inuu soo bandhigo waqtiyada joogsigaaga. Laga soo bilaabo waayo-aragnimadii hore ee shirkadda baska, kuwa waa inay istaagaan meel u dhexeysa mala-awaalka aqoonta leh iyo male-awaalka tooska ah, sababo la xiriira xaaladaha taraafikada waddooyinka oo aan la saadaalin karin (sida hal saac oo saxmad ah oo hareeraha Villeneuve Loubet ah).
Marka laga reebo jidadka tooska ah ee garoonka diyaaradaha 98 iyo 99, basasku badanaa ma socdaan wixii ka dambeeya 20:00. Tareenku si kastaba ha noqotee wuxuu shaqeeyaa laga bilaabo 04: 30 illaa illaa saqda dhexe. Shan wadiiqooyinka basaska habeenkii (oo loo yaqaan Noctambus) waxay u adeegaan qaybaha ugu muhiimsan ee magaalada, laga bilaabo 21:10 illaa 01:10, iyo TAM ayaa sidoo kale hadda soo bandhigtay basas aan caadi ahayn habeenkii oo dhan khadka 100. Basaska habeenkii waxay ka baxaan Saldhigga JC Bermond, oo u dhow istaanka basaska, iyo qiimaha maalinlaha ah ee lagu raaco jidadkan habeennada ah. Haddii aad qorsheyneyso booqasho ku lug leh soo noqoshada fiidkii dambe, tixgeli adeegyada tareenka, oo bixiya nooca ugu kalsoon ee safarka soo daaha.
Barta basaska looga raaco jihada Villefranche, Eze Village, Cap Ferrat, Monaco iyo Menton waa Segurane / Garribaldi; basaska dhanka galbeed u jeeda garoonka diyaaradaha, Antibes iyo Cannes waxay ka bilowdaan Albert 1er / Verdun una dhow Hotel Meridien.
Juan-Les-Pins oo u dhow Nice
Nice ma leh metro iyo baahi yar oo mid ah. Adeegga tareenka ugu weyni waa tareenka qaranka ee waddanka loo yaqaan 'SNCF', oo ku faanaa xawaaraha sare ee TGV (gaabis ku yimaada Marseille ka dibna aad ugu sii socda Paris) iyo tareennada joogsiga ah ee TER, ee u adeega magaalooyinka waaweyn ee Riviera ee u dhexeeya Cannes iyo Ventimiglia ee xadka Talyaaniga, oo ay ku jiraan safarka maalinlaha ah ee Monaco.
Si aad ufiican looma yaqaan waa wadada yar ee cariiriga ah ee tareenka Chemin de Fer de Provence, taas oo ka timaada Nice iyada oo loo maro dooxada Var iyo wadada loo maro Napoleon, 3 saacadood ilaa Digne ee Upper Provence. Bilaha xagaaga, qeybta dambe ee safarka wuxuu u wareegayaa tareen uumiya oo dhab ah, the Train des Pignes.
Uma baahnid baabuur si aad u sahamiso Nice lafteeda, oo haddii aad keento ama shaqaalaysiiso waxaad filanaysaa waxoogaa jahawareer ah. Bartamaha magaalada oo ciriiri ah waxaa daboolay nidaam hal dhinac ah oo dhib badan. Baabuur dhigistu aad bay u kooban tahay-dhammaan baabuurta la dhigto meel kasta oo dhexe waa mitir inta lagu jiro maalintii, xitaa iyadoo ay taasi jirto aad bay u adag tahay in meel la helo; waxaad arki doontaa Nicoise oo faraxsan oo laba-dhigasho dhiganaya si aad dukaammada ugu tagto. Haddii aad u baahan tahay meel baabuurta la dhigto oo la isku haleyn karo, sharadkaaga ugu fiican ayaa ah inaad iibsato tigidh dherer go'an (Times) mid ka mid ah jardiinooyinka baabuurta dhulka hoostiisa ah, kuwaas oo dhowr ka mid ah ay bixiyaan marin 24-saac ah. Waxaad filan kartaa inaad bixiso € 8-10 maalintii baarkinka noocan ah.
Helitaanka ugu fiican waa gaari laga soo qaado A8 otoroute. Gegada diyaaradaha si wanaagsan ayaa looga saxiixay A8 iyo A8 si wanaagsan ayaa looga saxiixay garoonka diyaaradaha. Kaliya iska hubi inaad ogtahay wadada aad u baahan tahay inaad raacdo markaad fuushantahay A8 iyo saldhiga markaad baxeyso. Gaar ahaan subaxa iyo fiidka saacadda ciriiriga ah, u oggolow waqti dheeri ah si loola tacaalo shilalka iyo saxmada gawaarida. A8 waxay lee dahay foosha xun meel u dhow garoonka diyaaradaha shilalka ayaa badanaa.
Xitaa haddii ay ka sii fiicnaato, ku wadista baabuurka Riviera waxaa loogu talagalay geesinimada: gobolku wuxuu leeyahay mid ka mid ah rikoorradii shilalka ugu xumaa ee Faransiiska qof walba oo deegaanka ka mid ahna wuxuu leeyahay sheeko uu ugu jecel yahay darawal waalan. Si kastaba ha noqotee, dhammaan shirkadaha waaweyn ee kirada baabuurta, iyo sidoo kale kuwa aan si fiican loo aqoon, ayaa jooga. Badankood waxay ku yaalliin terminaalka 2. Haddii aad dooratid, iskuday inaad soo qaadatid baabuur durba si fiican u shiicaysan si aan cidina u dareemin digaagga iyo xagashada cusub ee aad ku dari doonto. Weligaa ha iloobin inaad xirto albaabada gaariga marwalba, si aadan udaacin kuwa wax afduuba.
Hadaad awoodo, iska ilaali tagaasida qaaliga ah ee qaaliga ah, in kastoo mararka qaar aadan xulasho lahayn. Had iyo jeer ma fududa inaad hesho taksi markaad u baahato mid. Intooda badani ka jawaabi maayaan in lagu bogaadiyo, oo waxay ka soo safraan oo keliya safka tagaasida, halkaas oo ay ka raacaan gawaarida gawaarida markabka. Wadayaasha tagaasida waxay leeyihiin wadashaqeyn weyn walaalahooda tagsi wadayaasha mana aqbali doonaan dalabyada ah inay ka boodaan safka rakaabka sugaya. Safafka tagaasida waxaa laga heli doonaa banaanka xarunta tareenka iyo hudheelada raaxada leh (tusaale ahaan banaanka Le Meridien ee 1 Promenade des Anglais).
Tagaasida waa la diiwaangeliyey oo shati la siiyey laakiin sida meel kasta, looma oga mid ka faa'iideysta dalxiisayaasha. Haddii ay suurtagal tahay, ku heshii heerka ka hor galaya cabsida. Haddii aad ku socoto mitirka, ku adkee mitirka inuu ahaado waqtiga oo dhan. Isku day inaad fariisato meesha aad ka arki karto si aad isla markiiba u weydiiso darawalka goorta / haddii uu shilka u baxo Qiimaha tagaasida ee kuyaala magaalada Nice waa inuu kayaryahay € 20, ilaa Antibes € 50, Monaco ama Cannes kudhowaad € 70 iyo St Tropez € 250. Gegada diyaaradaha ee u gudubta Nice waa canshuuro go'an oo ku dhow € 35, iyadoo ku xiran waqtiga maalinta, laakiin waxaa lagugu garaaci karaa lacag dheeri ah oo ku saabsan shandadaha ama joogitaanka qof rakaab ah oo 4aad ah (oo loogu talagalay in lagu niyad-jebiyo wadaagga taksiga).
In kasta oo Nice ay tahay magaalada 5 -aad ee ugu weyn Faransiiska, haddana qayb aad u badan oo ah meelaha dalxiiska ayaa ku dhow Xarunta Magaalada, ugu badnaan nus -saac socod ayay isu jiraan.
Waxa ugu weyn ee laga reebayaa waa goobta taariikhiga ah iyo matxafka Cimiez, oo ah socod dheer, laakiin basaska si fudud loogu heli karo.
Khasaaraha kaliya ee “lug ahaan” ayaa ah meelaha qaar fiiro gaar ah u lahan la'aanta baahida kuwa dhaqdhaqaaqoodu yaraaday - kuraasta curyaamiinta - maadaama daadinta dhagaxyada gabi ahaanba ay khatar tahay.
Adoo ku maraya shaashad isku dhafan iyo rooti
Waxaa jira meel aad ka kireysan karto skates-ka oo la yiraahdo, Fun 'N Roll 13, rue Cassini, (waxyar woqooyi-galbeed dekedda / dekedda / quay).
Nice waxay rakibtay nidaam kiro baaskiil dowladeed oo loo yaqaan "Vélo Bleu". Diiwaangelintu waxay ka bilaabataa € 1 maalintii illaa € 25 / sanadkii. 30-ka daqiiqo ee hore waa bilaash umana baahnid wakhti dheeri ah si aad magaalada ugu dhex wareegto. Saldhigyada Vélo Bleu waxaa laga heli karaa magaalada oo dhan. Websaydhkoodu wuxuu bixiyaa khariidado saldhigyo ah.
Haddii aad leedahay baaskiil kuu gaar ah, marna uma baahnid inaad meel dheer aado si aad u hesho meel aad dhigato, maadaama ay jiraan barroosinnooyin fara badan oo magaalada ku yaal. Kaliya hubso inaad haysatid quful wanaagsan (iska ilaali fiilooyinka-fiilooyinka ee lagu gooyn karo ilbidhiqsiyo gudahood), si aad u xirto qafiska (oo kaliya maahan giraangirta) iyo in giraangirahaaga aan lagaa saari karin qalab la'aan.
Waxa ugu weyn ee lagu arko Nice waa aragtiyada ay weheliyaan Promenade des Anglais, kaas oo ka baaraandega xeebta xeebta in ka badan 5 km, ka dibna ku dhammaada Nice Airport. Kuwani waa aragtida aad ku arki doontid daraasiin kaararka boostada ah iyo sawir gacmeedyo uu sameeyay farshaxamiistaha qarnigii 20aad, Henri Matisse, oo sannado badan ku noolaa magaalada Nice, laakiin haddii aad sawirro aragtay iyo haddii kaleba, naftaada ayaa lagugu leeyahay ku dul lugee xoogaa fiditaankan ah haddii aad ka sameysay Nice.
Colline du Château. Buurta qalcadda leh ee eegaysa Baie des Anges iyo dekedda waxay leedahay meel muuqaal qurux badan oo magaalada fiirineysa. Wax badan kama hadhin burburkeedii qalcaddii derbiyada burbursan ka sokow. Weli, fuulitaanka jaranjarooyinka si aad u gaarto dhufto ee 90 m ka sareysa Nice ayaa si fiican u qalantaa aragtida. Waxa kale oo jira wiish (wiishka) kaas oo kaa qaadi doona seddex meelood meel wadada kor. Xadiiqadda buuraha qalcaddu waxay xirmaysaa qorrax dhaca. Filo in lagaa gelbiyo bannaanka haddii aad sii dheeraato.
Nice waxaa sidoo kale loo yaqaan dhowr matxaf. Qaar ka mid ah kuwa ugu caansan waxay ku yaalliin Cimiez, ka weyn, qaybta sare ee magaalada oo qarnigii ka hor ay jeclayd boqoradda Victoria, oo ay ka mid yihiin:
Musée des Arts asiatiques, 405, Promenade des Anglais (Ka soo horjeedka garoonka diyaaradaha),. 2 Maajo ilaa 15 Oktoobar: 10: 00-18: 00; 16 Oktoobar ilaa 30 Abriil: 10: 00-17: 00. Hindida, Shiinaha, Koonfur-bari Aasiya, iyo farshaxanka adduunka ee qaabdhismeedka weyn ee harada. Booqasho bilaash ah, shir, Qi Gong iyo Tai Chi Chuan.
Parc Phoenix, 405 Promenade des Anglais,, fax: + 33 492 29 7701. maalin kasta, Abriil-Sebt: 09: 30-19: 30, Oktoobar-Maarso: 09: 30-18: 30. 2500 dhir kaladuwan oo kuyaala beerta botical iyo guriga galaaska kulaylaha. Sidoo kale xayawaano kala duwan. . 2.
Musée Marc Chagall, Avenue du Docteur Ménard 36,. Maajo-Oktoobar: 10: 00-18: 00; Nofeembar-Apr: 10: 00-17: 00; Jan 01, May 01, Dec 25 wuu xidhan yahay. Xitaa haddii aadan ku jirin fanka tani waa matxaf aan la seegi karin. Waxaa ka mid ah daaqadaha muraayadaha leh ee farshaxanka. Qiimaha buuxa: € 8, Qiimaha la dhimay: € 6, Bilaash: Ardayda ka hooseysa 26 iyo qof walba Axad kasta oo ugu horreysa bisha. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Musée Matisse, 164, Avenue des Arènes de Cimiez (Basaska 15, 22, 17, 20), fax: + 33 4 9353 0022. maalin kasta marka laga reebo Tu, 10: 00-16: 00. Uruurinta soo jiidashada sawirada, sawirada iyo farshaxanada qarnigii 17-aad Genoese villa € 10.
Musée d'Archeologie de Nice (Ku xig Matxafka Matisse),, fax: + 33 4 9381 0800. maalin kasta marka laga reebo Tu, 10: 00-18: 00. Burburka degitaankii Gallo-Roman ee Cimiez, oo lagu daray matxaf leh dukumiintiyo fiican oo ku saabsan nolosha Gallo-Roman (laakiin badiyaa kuma qorna Ingiriis). Hawlaha carruurta. Gelitaan bilaash ah; 3 safarro hagitaan ah.
The magaaladii hore (Vieux Nice) buurta hoosteeda waxaa ku yaal buuq fara badan oo jidad iyo luuqyo leh, oo leh guryo badan oo qurux badan, dukaamo iyo hoy ubax maalinle ah iyo suuq miro Koorsooyinka Saleya. Intaa waxaa dheer, kaniisadda maxalliga ah, Baroque Cathédrale Sainte-Réparate, qalbiga Vieux Nice, waa quruxsan yahay. Waxaad ubaahnaan doontaa inaad ku dhex socoto meesha loo yaqaan 'Sainte-Réparate', si kastaba ha noqotee, intaad ku sugan tahay magaaladii hore. Haddii albaabadu furan yihiin, gal oo eeg gudaha iyo sawirrada.
Kaliya N magaalada jir waa Matxafka Farshaxanka Casriga iyo Casriga (MAMAC; furo Tu-Su, € 10) oo leh afar munaaradood oo isku xiran oo ay ku jiraan farshaxanno casri ah iyo kuwa casri ah iyo farshaxanadooda, sawir gacmeedyadooda, iyo rakibidda fikradeed. Meelaheeda saqafka hawo-furan waxay bixiyaan mid ka mid ah panoramas-ka ugu wanaagsan magaalada.
Dhanka galbeed, waxaa jira Musee des Beaux-Arts guriyeynta ururin aad u fiican oo ah pastels iyo shaqooyin kale oo ay sameeyeen Jules Cheret, iyo farshaxanno kale.
Haddii aad aadeyso Nice si aad u qubeysato ama aad ugu nasato xeebta, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad mar kale ka fikirto Xeebaha Nice waxay ka kooban yihiin gebi ahaanba dhagaxyo waaweyn (galleyda). Dhowr xeebood oo gaar loo leeyahay ayaa ku darsaday lakab ciid ah, laakiin xeebaha dadweynaha ee bilaashka ah waa khibrad dhagaxan. Tuwaal ama dermo ka sokow, hubaal waa inaad keentaa kabo kabo ah, maxaa yeelay ku dul socodka dhagxaanta ayaa xanuun noqon kara, iyo barkimo haddii aad rabto inaad fadhiisato Qubeys bilaash ah ayaa laga helaa dhammaan xeebaha dadweynaha waxaana ku yaal aag xeebta laliska oo lagu ciidey ciid cad.
In kasta oo xeebuhu badanaa yihiin quruurux haddana waxaa muhiim ah in la ogaado in dad badan oo soo booqda ay ku raaxaystaan ​​badweynta buluugga fudud ee quruxda badan ee lagu dabaasho. Haddii aad u dul qaadan karto inaad ku dhaqaaqdo xoogaa tallaabooyin ah oo ku saabsan jajabyada xaqiiqdii waa fursad lagu dabbaasho halkii aad ku ciyaari lahayd biyaha maadaama xeebta si deg deg ah u soo dhacayso isla markaana jiidaha qulqulatadu uu noqon karo mid aad u xoog badan, oo aan ahayn bilowga. Ku jiifsiga xeebta qorrax ama nasasho sidoo kale waa la maamuli karaa illaa iyo inta aad dib-u-habaynayso dhagaxyada / quruuruxyada dusha sare ee fadhiga iyo jiifka. Xeebaha gaarka loo leeyahay waxay bixiyaan adeegyo kala duwan oo laga helo maqaayadaha / baararka ilaa kirada kuraasta fadhiyada iyo tuwaalada.
Xeebo aad u qurux badan ayaa ka jira magaalooyin kale oo dhow, sida Villefranche-sur-Mer, Antibes iyo Cannes, oo aad uga ciid badan. Villefranche waa xulasho xeebeed si gaar ah loo doorto, gaar ahaan haddii aad la safreyso carruur, kaliya labaatan daqiiqo oo u jirta baska TAM 100.
Si kastaba ha noqotee, socodka xeebta ee aragti weyn, Promenade des Anglais ayaa lagu doodi karaa inuu yahay mid aan la qiyaasi karin.
Aragtida Nice meesha ugu fiican ee ugu fiican waa dhererka Mont Boron (bas 14). Laga soo bilaabo gurigii duugga ahaa ee foosha xumaa iyo villa ku dhow Sir Elton John waxaa jira aragtiyo wanaagsan oo ku saabsan magaalada ilaa buuraha iyo bariga Villefranche iyo Cap Ferat.
Tag Èze. Waa tuulo yar oo loo maro Monaco. Tuuladu waxay ku taal buur yar waxaana ku yaal jardiin aad u qurux badan oo leh muuqaal qurux badan (waa in la arkaa, fee 5 khidmadda laga soo galo). Waxa kale oo jira warshad udgoon Fragonard oo aad ku booqan karto bilaash. Si aad u gaarto Eze bas ahaan, u raaca 112-ka tuulada Eze (ma aha 100 ee istaaga Eze Gare, oo 90 daqiiqo u jirta Eze Village). Haddii aad seegtay bas aan caadi ahayn (illaa 3 saacadood) oo ah 115 tuulada Eze Village, waxaa jira waddo ka soo degta buurta oo ka timaadda Eze Village ilaa Eze Sur Mer (sidoo kale Eze Gare). Tani waa Jidka Nietzsche (oo loogu magac daray falsafada caanka ah ee reer Jarmal ee Friedrich W. Nietzsche), oo leh aragtiyo cajaa’ib leh iyo biyo-dhac (haddii aad taqaanno meesha aad raadineyso) Socodka hoose ee wadadaani waxay qaadataa qiyaastii 40 daqiiqo. Basasku waxay ka socdaan Menton-Monaco iyagoo sii maraya Eze Gare oo dib ugu noqonaya Nice 15kii daqiiqo ee kasta ama wixii la mid ah iyo sidaas lidkeed, taas oo ka dhigaysa ku soo noqoshada buurta mid aan loo baahnayn
Sidoo kale waxaa u dhow Villa Ile France, oo ka tirsan Baroness Ephrussi de Rothschild, oo ku wareegeysa jasiiradda weyn ee St Jean Cap Ferrat halka loo yaqaan 'Triangle Golden' ee Villefranche, Beaulieu iyo Cap Ferrat.
Wadooyinka socodka waxay ka soo baxaan La Turbie oo ka sarreysa Monaco iyo Grande Corniche, kuwaas oo laba jibbaar ka sarreeya heerka badda ee Eze waxayna ku siinayaan socodka adag ee runta ah meelaha xiisaha leh ee Riviera.
Socodka buurta (Sentier Littoral) (ka gudub dekedii hore (laga yaabee 15 daqiiqo oo lug ah) kuna sii jeedda dhanka bari ee magaalada Monaco, waxaa jira waddo yar oo ka timaadda Coco Beach oo ku teedsan dhinaca geeska). Waad raaci kartaa dariiqa hareeraha Cap de Nice kala badh ku maraya Villefranche, laakiin u diyaar garow dhawr boqol oo tallaabo oo aad dib ugulaabaneyso wadada. Waa socod aad u qurux badan waxaadna helaysaa inta badan dadka deegaanka oo isticmaalaya.
Opéra Nice Cote d'Azur, 4 & 6 rue Saint-François de Paule (In Vieux Nice oo u dhow Cours Saleya. Baarkinka bilaashka ah ee Palais de Justice iyo Cours Saleya),. Gurigan opera wuxuu martigeliyaa oo keliya bandhigyada opera laakiin sidoo kale xaflado badan oo ka mid ah Orchester Philharmonique de Nice iyo xafladaha muusikada qolka, iyo qaar ka mid ah bandhigyada baleedka. Websaydhka guriga wuxuu ku qoran yahay Faransiis oo keliya, laakiin xitaa haddii aadan si fiican ugu akhriyin Faransiiska, waa inaad awood u yeelataa inaad kala soo baxdo macluumaadka kalandarka kalandarka (calendrier). (cusbooneysiiyay Nofeembar 2015)
Waxaa jira iskuulo badan oo bixiya koorsooyin ku baxa Faransiiska. Waxaa laga yaabaa in kuwa ugu caansan ay yihiin Alliance Française iyo EF.
Carabi,. Dhacdada Isdhaafsiga Luuqada Faransiiska / Ingriiska ee Nice, toddobaad kasta qaar ka mid ah goobaha ugu wanaagsan Nice oo dhan. Layliskaaga Faransiiska intaad wakhti fiican la qaadanayso dadka deegaanka. Soo ogow qaabka wada hadalka 14-ka-fool-ka-fool ah ee wada hadalka (7 min oo Faransiis ah, 7 daqiiqo oo Ingiriis ah).
Guud ahaan Riviera waa meel dadku u yimaadaan inay lacag ku qaataan halkii ay kasban lahaayeen. Heerarka shaqo la'aanta ayaa sarreeya, shaqo caadi ah oo adag in la helo, iyo sida meel kasta, shaqooyinka warshadaha adeegga waxay u muuqdaan kuwa tagaya kuwa filanaya mushahar hoose.
Sophia Antipolis waa xafiis weyn / saynis / teknoolojiyad baaxad leh 20 daqiiqo oo ka baxsan magaalada Nice, taas oo saldhig u ah shirkado fara badan oo Faransiis ah iyo kuwa caalami ah.
Kuwa leh aqoonta saxda ah iyo khibrada raaxada, doomaha waaweyn ee Antibes International Yacht Club waxay soo saareen warshad weyn oo shaqaalaha iyo howlaha doonta ah oo soo jiidata dhalinyaro badan oo Ingiriisiga kuhadasha. Xiriirintu waa isku mid muhiimad maadaama doomaha inta badan ay dhajiyaan calaamado si looga hortago su'aalaha caadiga ah - "looma baahna shaqaale maalmeed"
Shirkadaha adeegga maaliyadeed waxay ku badan yihiin magaalada Monaco taas oo si fudud looga wada safri karo shirkadda Nice.
Haddii aad dooneysid xirfad aad ku raacdid mid ka mid ah superyachts-ka badan ee Nice meel fiican oo aad iska diiwaangeliso oo aad bilowdo inaad eegto waa Crew Central
Ubaxa iyo suuqa cuntada rubucii hore
Inta badan dukaamada iyo maqaayadaha ku yaal Nice waxay aqbali doonaan kaararka deynta ee waaweyn, iyo kaararka bangiga ee bangiyada waaweyn (wax kasta oo sita EC ama Maestro ama logos Visa). Haddii tani ay fashilanto waxaad had iyo jeer lacag ka heli kartaa mid ka mid ah kuwa tirada badan ATMs.
Dhammaan dukaamada ayaa hadda loo oggol yahay inay furaan Axad kasta, illaa iyo Nofeembar 2010, ugu yaraan kuwan soo socda ayaa bilaabay inay furaan Axad kasta: H&M, Zara, Fnac, Bershka, Celio, Virgin Megastore, Iyo Isbaanish. Meelaha qaarkood ee Galleries Lafayette hadda waxay furan yihiin dhowr Axad bil kasta laakiin dhammaantood maahan, si isku mid ah ayey u socdaan Nice Etoile Shopping Center.
Kaararka boostada (sida waxyaabo kale oo badan) aad ayey ugu kala duwan yihiin qiimaha. Samee xoogaa isbarbardhig ah dukaameysi maadaama qiimaha udhaxeeya 20 senti iyo € 1 kaarka boostada caadiga ah. Caadi ahaan waxay dib kuu dhigi doonaan 25 senti midkiiba (Juunyo 2009).
Wadada weyn ee wax iibsiga ee magaalada Nice Jean Medecin wuxuu hoy u yahay laba dukaan oo muusig / madadaalo oo waaweyn, Virgin Megastore iyo Faransiiska FNAC. FNAC hubaal waxay leedahay gees maadama xarumahooda dhageysiga badan ay kuu ogolaanayaan inaad "isku daydo intaadan iibsan" ku dhowaad CD kasta oo guriga ku jira, halka Virgin ay riixayso kaliya xulashooyin xayeysiin ah. Labaduba waxay ku socdaan siyaasad qiimo isku mid ah albumyada cusub. FNAC waxay ku dhowdahay HMV, oo bixisa noocyada madadaalada badankood oo ay kujiraan buugaagta, ciyaaraha, CD-yada, iyo DVD-yada. Dukaanka oo ka kooban 4 dabaq oo ku yaal Av. Jean Medecin wuxuu mudan yahay sahaminta!
Dharka calaamadeeyaha naqshadeeyayaasha ayaa ah, sida meel kasta, caan ku ah qaali laakiin alaabada guud ee moodada ayaa runtii runtii jaban marka loo eego inta badan dalalka kale ee Yurub, iyo Galleries Lafayette Waxay bixisaa wax badan hoostiisa. Haddii taasi aysan kugu filneyn, waxay sidoo kale leeyihiin supertore weyn oo ku yaal Cap 3000 oo ku xigta St Laurent de Var oo garoonka diyaaradaha dhaaftay (Lignes d Azur 52 iyo TAM bas 200, 400 iyo 500, joogso La Passerelle). Tani sidoo kale waxay hoy u tahay Galleries Lafayette Gourmand, Supertore cunto ah oo kula tartamaya London Harrods iyo Is-goysyada. Xulashada khamrigu waa mid aad u fiican, gaar ahaan marinnada ay ka buuxdo Rose de Provence, oo waxaa jira nus dersin ah dukaan-ku-yaal meelo qado-waqti ah.
Moodooyinka gorgortan jaban ayaa si fiican looga raadiyaa suuqa weyn ee furan ee Ventimiglia maalin walba oo jimce ah, tareen ayaa laga heli karaa magaalada Nice Gare Ville ilaa Ventimiglia oo dhowr kiilomitir u jirta soohdinta Talyaaniga. Kaliya iska ilaali magacyada raaxada been abuurka ah ee ay iibinayaan dad badan oo wadada ku iibiya. Dagaalka ka dhanka ah been abuurka waxaa si dhab ah u qaatay booliska xuduudaha Faransiiska ganaaxyo waaweynna waxaa lala beegsaday dalxiisayaasha "aan waxba galabsan".
Xarunta dhexe ee Nice Etoiles ayaa loo heli karaa qof kasta oo u kuur galaya booqashada suuqa laga dukaameysto, oo ay ku jiraan seddex dabaq oo sumad Dutch ah oo aysan dadka Ingiriisku arkin muddo 20 sano ah oo weli ku weyn Faransiiska - C&A. Niyad jab badan ayaa sidoo kale laga heli karaa av Jean Medecins '"Damart" - haa, dadkii ku siiyay "nigiska Thermolactyl" si ay kuugu diiriso xilliga qaboobaha sidoo kale waa kuwan halkan. Ku saabsan sida macquul ah ee maxalliga ah Qoraxda qolalka maqaarka.
Ogeysiis taxaddar leh: Dukaammada "bilaashka ah" ee ku yaal afaafka garoonka diyaaradaha ee Nice ayaa ah qiimaha ugu xun ee abid ee aad waligaa hesho oo ay tahay in laga fogaado dhammaanba qiimaha: qiimayaashu way ka sarreeyaan kuwa xitaa waddada dheer. Cuntada, cabitaanka iyo sigaarka si cabsi leh ayaa loo qiimeeyay, mana jiraan wax gorgortan ah “kahor intaadan duulin”. Haddii aadan wali caadeysan caadeysiga, sigaarka gaar ahaan sigaarka waxaa ugu wanaagsan in laga iibsado Talyaaniga dhanka xadka, halkaas oo canshuuraha sigaar cabista aysan gaarin caafimaadka dhiirrigelinta heerarka ciqaabta
Suuqa ubaxa (Marché aux Fleurs), Koorsooyinka Saleya. Tu-Sa 06: 00-17: 30; Su 06: 00-12: 00; fasaxyada dadweynaha xiran.
Marché aux Miraha iyo digiraha. Tu-Su 06: 00-13: 00. Suuqa cuntada.
Suuqa qadiimiga ah. M 07: 30-18: 00.
Floiss Confisserie, 14, Quai Papacino ,. M-Sa 09: 00-12: 00, 14: 00-18: 30. Dukaankan qurxinta leh wuxuu leeyahay saxmad gaar ah, miraha macaan iyo geedaha yaryar, kuwaas oo dhaqan ka ah aaggaas. Cuntada candied iyo macaanka ubax waa takhasusyadooda wanaagsan.
Xagee joogaa Nice
Waxaa jira tiro hoteello ah oo u jira masaafada lugaynta 1 -aad ee Madaarka iyo bas baska hudheelka oo gaar ah oo u adeega hudheelada kale ee ku dhex yaal Nice lafteeda. Hoteelada ku dhow garoonka diyaaradaha ayaa aad uga fog xarunta Nice (7 km) waxayna qaadan doontaa safar bas ama tagsi si ay u gaarto Xarunta. Huteelo badan oo casri ah oo Faransiis ah ayaa laga heli karaa magaalada, in kasta oo ay yar yihiin rubuc -qarnigii laftiisa, oo inta badan ah guryo. Goobaha ku habboon waxay u dhexeeyaan saldhigga weyn iyo socod -socodka, gaar ahaan hoosta Boulevard Victor Hugo iyo bariga Boulevard Gambetta. Huteelada ka durugsan xeebta badda ayaa aad ugu habboon agagaarka waddada tareenka ee waddada Avenue Jean Medicine ama Avenue de la Republique.
Waxay umuuqataa xalka ugu fudud inuu joogo hoyga dhalinyarada. Waxaa jira tiro aad u tiro badan oo ku sugan Nice:
Mont-Boron. Route Forestière du Mont-Alban. Waxay ku taal 4 km magaalada Nice ee keynta.
Les Camélias, 3, rue Spitalieri. Waxay ku taal agagaarka xarunta laga dukaameysto Nice Etoile, oo ku taal bartamaha magaalada.
Fiditaanka Villa Saint. 22, Avenue Gravier. Hoteel la yaab leh oo leh xaflad xaflad weyn, waxaa ku jira internet bilaash ah iyo quraac bilaash ah. Waxay ku taal meel woqooyi ka xigta Waqooyiga Magaalada oo ku taal kaniisad hore. Waxaad si fudud bas uga raaci kartaa xarunta tareenka Nice Ville (1, 2 ama 23), shaqaaluhu aad bay waxtar u leeyihiin, aqoon ayay u leeyihiin oo xitaa lacag la'aan bay ku qaadi doonaan haddii aad soo daahdo.
Bakhaarka Backpacker ee Chez Patrick. 32, Rue Pertinax. Guri hudheel nadiif ah oo raqiis ah oo leh qolal hurdo iyo jiko wadaag ah. Kooxda martida loo yahay waa mid naxariis badan oo waxtar leh waxaadna daqiiqado u jirtaa xarunta tareenka Nice (Gare SNCF) iyo dhowr mitir meel u jirta xarunta taraamka ee ku xigta.
PV-Fasaxyada Ressidence Maeva Nice Les Palmiers,. Guri seddex dabaq ah oo la dayactiray, kuna yaal beero gaar ah oo ku yaal bartamaha degmada Fabron. 500 mitir dukaamada, 800 m xeebta, 4 km u jirta dekedii hore ee Nice iyo garoonka diyaaradaha 6.5 km.
Ahaanshaha magaalo aad u dalxiis badan, way fududahay in la helo tiro hudheelo yaryar ah oo si fiican loo aqbali karo, caadi ahaanna si qumman.
Hoteelka Galbeedka Ugu Fiican Riviera Nice, 27 waddo Thiers,, fax: + 33 4 93 87 33 99. Hoteelka 3 * oo kuyaala Xarunta Nice oo udhow Saldhiga Nice
Hotel Anis, 50, Avenue de la Lanterne (agagaarka garoonka diyaaradaha),, fax: + 33 4 93 83 31 16. Barkadda dabaasha, makhaayada.
Le Mas des Selves,. Sariir qurux badan iyo Quraac.
Citadines Nice Buffa. Si fiican loo magacaabay iyo qol badan laakiin, u diyaargarow xoogaa socod ah meelaha soo jiidashada badan iyo Xarunta Magaalada. Dhowr dukaan oo waaweyn oo dhow iyo dhowr waddo bas ayaa u gudbaya dibadda (haddii aad kala saari karto jadwalka!)
Hoteelka Kanada. Quaint way fiicnaan laheyd in lagu sharaxo meeshan. Ma ahan kan ugu fiican. Laakiin waa bartanka Nice, shaqaale saaxiibtinimo oo wanaagsan sidoo kale. € 55/65 habeenkii hal kali / labalaab.
NH Nice, 2-4, Parvis de l´Europe. 06300 Nice ,. Waxay ku taalaa 'magaaladii hore' qaybta Nice, hudheelkani wuxuu bixiyaa jimicsi, sauna, barkadda dabaasha iyo raaxo dhammaystiran. Laga soo bilaabo € 99.
Hotel Suisse, Promenade des anglais 15 Quai Raubà Capéù (Wax yar uun ka hooseeya Colline du Chateau oo ku xigta asenceur), fax: + 33 493853070. Soo-bixid: 11:00. Waxay ku taal meel aad ugu dhow badda iyo rubucii hore. WiFi bilaash ah oo ku yaal hoolka. Qolalka Sare iyo Mudnaanta waxay leeyihiin balakoon yar oo miis iyo laba kursi ah oo aad ku fariisan karto oo aad ka daawan karto dabaasha guud ahaan biyaha ku yaal Nice. Qolalka waa yar yihiin laakiin waa fiican yihiin, adeeguna waa heer sare. In kasta oo ay leedahay saddex xiddigood oo keliya, haddana waxay leedahay aragtiyo iyo adeeg la yaab leh. € 80 ilaa € 200 (muuqaalka badda iyo balakoonada ayaa isbadal sameeya).
4-xiddig hôtel Goldstar Resort & Suites Nice, France (Guryaha Furnished iyo qolalka ku yaal bartamaha Nice), 45 Rue Maréchal Joffre- 06000 - Nice ,.
Gounod, Rue Gounod 3,. Isticmaalka bilaashka ah ee barkadda iyo harooyinka ku yaal albaabka xiga ee Hotel Splendid. € 150.
Grimaldi Hotel Nice, 15, rue Grimaldi 06000 Nice France,, fax: + 33 4 93 87 00 24. Hoteelka 4 * oo ku yaal Xarunta Nice oo u dhow Promenade des anglais iyo Nice taariikhi ah.
La Perouse, Quai Rauba Capeu 11 ,.
Boscolo Exedra Nice, 12 Boulevard Victor Hugo,, lacag-la'aan: + 1-844-2672656. Silsilad Talyaani ah oo heer sare ah oo leh is -beddel iyo cunno wanaagsan oo ku yaal Bartamaha Magaalada. ~ € 150.
Negresco, Promenade des Anglais 37,. Huteel caan ah oo caan ku ah magaalada Nice. Guryo Le Chantecler, baarar iyo naxaas. Waxay mudan tahay in la fiiriyo xitaa haddii aadan halkaa sii joogi doonin. Aad qaali u noqon karaa iyadoo kuxiran xilliga. -500 2000-XNUMX.
Guri xun, 48 Bvd Victor Hugo ,. Meel waasac ah & soo dhaweyn leh oo lagu dejiyay Belle Epoque boulevard (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Nabdoonow oo iska ilaali khayaanada ka socda Nice
Nice kama khatar badan tahay magaalooyinka kale ee dalalka reer galbeedka - hase yeeshe, taxaddarrada aasaasiga ah ayaa loo baahan yahay mararka qaarkood.
Magaalada Nice waxaa lagu yaqaan inay tahay magaalada ugu tirada badan ee askarta booliska ah qofkiiba - tan iyo dhacdadii naxdinta laheyd ee 2016 ee socodkii, Nice waxay martigalisaa tiro badan oo roondo militari ah. Waxay xoogaa cabsi gelin karaan inay kulmaan, gaar ahaan saqda dhexe ee habeenka, sikastaba ha ahaatee waxay ujoogaan inay ilaaliyaan hawada xakamaynta. Inta badan dadka Faransiiska waxay ilaashadaan hubkooda inuu yahay mid been abuur ah, caadiyanna waligood kulama macaamili doonaan.
Tilmaamo dhawr ah oo aad ku badbaadi karto ayaa ah:
Ha qaadan “taksi” aan shati lahayn! Taasi waxay la socotaa labalaab sidaasna mararka qaarkood sida Bandhigga Filimka, gaar ahaan haddii aad tahay dumar oo aad khamri cabtay oo aad dabaaldegtay.
Ka taxaddar jeebadaha, kuwaas oo dhibaato joogto ah oo culus ku haya Côte d'Azur. Waxay inta badan ku shaqeeyaan kooxo meel kasta oo dadku ku badan yihiin sida basaska, saldhigyada tareenka, iyo goobaha dalxiiska. Ka feejignow xarunta taraamka, Gare Thiers, halkaas oo boorsooyin boorsooyin ah ay ku ugaadhsadaan dalxiisayaasha daala socdaalka. Waxay si fiican ugu muuqan karaan rakaab kale oo aan dhib lahayn, laakiin iyagu aad ayey xirfad u leeyihiin waxayna boorsadaada ka qaadi doonaan jeebka surwaalkaaga hore ama kan dambe adigoon ogeyn. Waxaa si adag lagugula talinayaa inaadan ku qaadan wax qiimo leh ama dhib leh oo aad ku bedesho jeebabkaaga. U isticmaal boorsooyin dharkaaga hoostiisa wax kasta oo qiimo leh, oo ay ku jiraan lacag caddaan ah. Makhaayadaha iyo makhaayadaha, xatooyada danaystayaasha ee boorsooyinka waa khatar joogto ah - ku dhow iyaga oo dhow.
Haddii aad ku safreyso gaari, taxaddar inaadan ku dhaafin gaariga wax qiimo leh markaad dhiganeyso. Xatooyada kabaha baabuurta waa arin gaar ah oo ku saabsan baarkinka dhulka hoostiisa ee magaalada Nice jir. Ka tagida armaajo shelf si ay u cadaato in bootka uu banaan yahay waa hab fiican oo looga hortago dhibaatooyinka.
Marka loo fiirsho warbixinnada wargeysyada maxalliga ah, welwelka nabadgelyada shaqsiyadeed waxay u badan tahay inuu soo ifbaxo wixii ka dambeeya 02:30, booqdayaashuna waa inay ku dhegaan waddooyinka si fiican u ifaya iyadoo ay weli dadku hareero taagan yihiin.
Haddii aad ku dhacdo dhakhaatiirta dambiyada ee Nice, Saldhigga Booliska Qaranka ayaa ah meesha aad u baahan tahay inaad tagto si aad u soo sheegto dhibaatooyinka sida jeebabka jeebka lagu qaato. Waxay ku taal isgoyska Ave Marechal Foch iyo Dubouchage, oo ah dhowr boqol oo mitir bariga Xarunta wax iibsiga ee Nice Etoiles. Waxay ku siin doonaan bayaannada lagama maarmaanka u ah inay taageeraan sheegashooyinka caymiska, laakiin ha ka filan inay soo celiyaan hantidaada. Waxaad ka heli doontaa saldhigga booliiska oo aad u mashquulsan dhibbanayaal kale ilaa dhammaadka fiidkii.
Sida magaalooyinka kale ee waaweyn, Nice waxay leedahay dhowr meelood oo ay tahay in laga fogaado. Meelaha ugu badan ee la sheegaa waa l'Arianne iyo Trinité, oo labaduba ku yaal bariga magaalada.
(Sunni) Masaajidka Rue de Suisse (bartamaha magaalada, meel u dhow katidral -ka oo furan waqtiyada salaadda oo kaliya)
Qunsuliyadaha ku yaal magaalada Nice
Austria, 6, Avenue de Verdun,, fax: +33 493 87 59 92.
Finland, Hotel Radisson SAS, 223, promenade des Anglais,.
Germany, 'Le Minotaure', 5e étage, 34, av. - Henri Matisse,, fax: + 33 4 93 83 05 50.
Greece, 2, Avenue Desambrois,, fax: +33 493 37 85 69.
Meelaha wanaagsan ee ku yaal galbeedka magaalada Nice waxaa ka mid ah Cagnes-sur-Mer, Antibes, Cannes iyo Saint-Tropez. Bariga magaalada Nice tareenada waxay istaagaan Villefranche-sur-Mer, Monaco iyo Menton, iyo magaalada xadka ku taal ee Ventimiglia. Waqooyiga Nice ee gudaha Provence, Vence iyo Saint-Paul de Vence waxay mudan yihiin booqasho loogu tago magaalooyinkoodii hore ee buurta iyo garoomada boules.
Villefranche-sur-Mer waa labo joogsi oo bari ka xigta saldhiga weyn ee Nice waana tuulo aad ufiican oo xeeb yar leh (waana mid aad uga roon dhagax yar magaalada Nice). Tuuladu way ka xasilloon tahay wayna ka dabacsantahay Nice. Tigidhka tareenka ee ka baxa xarunta weyn ee Nice waa uun 1.70 81 waddo kasta. Waxaad sidoo kale halkaas ku imaan kartaa baska 100 ama XNUMX - ama adoo ku lugeynaya socodka dabiiciga ah ee buuraha dhexdooda wax ka yar saacad.
Saint-Jean-Cap-Ferrat: Waxaa ka mid ah villa-yada qaaliga ah ee ku yaal daboolkan, Villa Ephrussi de Rotschild waa midka ugu cajaa'ibka badan. Waad ku dhex socon kartaa daboolka dariiqa oo aad ku joogsan kartaa dabaasha.
Beaulieu-sur-mer: Midigta ku xigta Cap Ferrat, magaaladan yari waxaa loo yaqaanaa xeebta iyo Villa Kerylos, oo ah qaab Griig ah oo la dhisay horaantii 1900.
Liguria - Riviera Talyaani ah oo ay ku jirto San Remo oo wax yar uun u jirta wax ka yar, tareenka ku beddela Ventimiglia
Tuulada Èze - masaafo yar oo saacad ah ayaa looga socdaalaa magaalada Nice, Èze waa tuulo qadiimi ah oo mudan in la arko, waa hadii ay maalin uun dhaafto.
Hoteelka Adagio Access Nice Acropolis
Hoteelka Adagio Access Nice Magnan
Huteelka Azurea Nice
Hoteelka B4 Nice Park
Hoteelka B4 Nice Plaza
Hoteelka Galbeedka Alba ee Ugu Fiican
Hoteelka Galbeedka De Madrid ugu Fiican Nice
Hoteelka Galbeedka Ugu Fiican Riviera Nice
Hoteelka Galbeedka Nautica ee ugu Fiican
Hoteelka Galbeedka New York ee ugu Fiican
Hoteelka Galbeedka Roosevelt ee ugu Fiican
Raaxada Hotel Galaxie Nice
Hoteelka Dante Nice
Hoteel Gaar ah Suisse Nice
Huteel Hotel Eco Spa & Xeeb Nice
Huteelka & Huteel Meyerbeer Beach Nice
Hoteelka Helvetique Nice
Hoteelka Lausanne Nice
Hoteelka Novotel Nice Arenas Aeroport
Hotel Novotel Nice Center
Noocyada Ibis Nice Port
Hoteelka Interlaken Nice
Hoteelka Kyriad Nice Port
Le Scribe Vacances Bleues Hoteel Nice
Hotelka Lepante Nice
Hotelka Les Cigales Hotel Nice
Hoteelka Locarno Nice
Lou Souleou Sariir & Quraac Wanaagsan
Huteelka NH Nice
Hoteel Farshaxan Nice
Hoteelka Nice Riviera
Guryaha Odalys Le Palais Rossini Nice
Park Inn Waxaa qoray Radisson Nice Airport Hotel
Tayada Hotel Flore Nice Promenade
Suites Tayada Tayada Fiican Deganaanshaha Fiican
Tayada Tayada Nice La Malmaison Hotel
Deganaanshaha Pierre et Vacances Les Palmiers Nice
Huteel qurux badan & Huteello Nice ah
Hoteelka Windsor & Spa Nice
eHalal Safarka Mart > Socdaalka Faransiiska Xalaal > Tilmaamaha Safarka Xalaasha ah